Gandaki Sanchar » सरकारको नियती मै खोट : ठूला भ्रष्टलाई ५ बर्षे हदम्याद, सानालाई जिन्दगीभर !
सरकारको नियती मै खोट : ठूला भ्रष्टलाई ५ बर्षे हदम्याद, सानालाई जिन्दगीभर !
माघ ९, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्दै आएका छन् । तर, उनै प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका दुईवटा ऐनका संशोधन प्रस्तावमा ठूला भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि हदम्याद तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनालाई फरक छुट्याउने अनोठो प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने ठूलालाई ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने, तर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी सानातिना भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने भनेर कानूनलाई अस्पष्ट एवं अमूर्त बनाउन खोजिएको छ ।
पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नपाइने पदाधिकारीले अवकाश पाएको पाँचवर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाइने भएता पनि अन्य सानातिनाको हकमा भने पाँचवर्ष पछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने दोहोरो मापदण्ड विधेयकमा छ । यसबारे प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ को उपदफा ९३० मा भनिएको छ,
दफा ४५ को उपदफा ९१० मा हदम्याद तोक्दै भनिएको छ, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी उपदफा २ मा ठूलालाई लक्षित गरी भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाशप्राप्त गरेको भए पनि अवकास पाएको मितिले ५ वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’
सूचना संकलनमा पनि बन्देज ?
यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास भयो भने सतर्कता केन्द्र नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभागबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरूको अनुगमनमा जान पाउने छैन् । यी निकायको सूचना संकलन गर्ने, उजुरी पेटिका राखेर उजुरी लिने जस्ता कार्य पनि बन्द हुनेछन् । साभार : अनलाईन खवरवाट
प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार १७:३३